Total Serum Protein Test (သွေးတွင်းအလုံးစုံအသားဓာတ်စစ်ဆေးခြင်း) - Hello Sayarwon
Total Serum Protein Test (သွေးတွင်းအလုံးစုံအသားဓာတ်စစ်ဆေးခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးနည်းများ » Total Serum Protein Test (သွေးတွင်းအလုံးစုံအသားဓာတ်စစ်ဆေးခြင်း)
Total Serum Protein Test (သွေးတွင်းအလုံးစုံအသားဓာတ်စစ်ဆေးခြင်း) ကဘာလဲ။
သွေးတွင်းပရိုတင်းဓါတ်အားလုံး စစ်ဆေးခြင်း ဆိုတာဘာလဲ။
ဒီစစ်ဆေးနည်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ပရိုတင်း တွေဖြစ်တဲ့ albumin နဲ့ globulin ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို စစ်ဆေးတဲ့ စစ်ဆေးမှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Albumin ကို အသည်းမှာ အဓိက တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ သွေးကြောအတွင်း သွေးစီးဆင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း၊ ဆေးအချို့နဲ့ အခြားအရာဝတ္ထုတွေကို သွေးအတွင်း သယ်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ တစ်ရှူး ကြီးထွားနှုန်းနဲ့ အနာကျက်ခြင်းတွေမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။
Globulin ကို alpha၊ beta နဲ့ gamma လို့ခေါ်တဲ့ ပရိုတင်းအမျိုးအစားတွေက ရရှိပါတယ်။ အသည်း (သို့) ကိုယ်ခံအားစနစ်က globulin ကို ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ အချို့ globulin တွေဟာ ဟေမိုဂလိုဘင် နဲ့ ပေါင်းပါတယ်။
globulin ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကတော့ သံဓါတ်အစရှိတဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေကို သွေးအတွင်း သယ်ပို့ပေးခြင်းနဲ့ ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းကို တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတွင်းပရိုတင်းကို လျှပ်စစ်လှိုင်းဖြတ်စီးပြီး စစ်ဆေးခြင်းနည်း Serum protein electrophoresis တွေဟာ globulin တွေကို အုပ်စုအခွဲတွေအဖြစ် ခွဲခြားပေးပါတယ်။
ပရိုတင်းအားလုံး၊albumin နဲ့ globulin ရဲ့ အဖြေတွေကို သွေးတွင်းပရိုတင်းဓါတ်အားလုံးစစ်ဆေးခြင်းနည်းမှာ သီးခြားစီဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အချို့ အခြေအနေတွေမှာတော့ ဆရာဝန်ဟာ အခြား globulin အမျိုးအစား (alpha-1 globulin) ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ ရှိပါတယ်။
Total serum protein test တွေကို ဘာကြောင့် လုပ်ကြတာလဲ။
သင့်မှာ အာဟာရပြဿနာတွေ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေရှိတယ်လို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူက သံသယရှိခဲ့ရင် ဒီစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ပရိုတင်းအားလုံးက ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ပြဿနာရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေဖို့ အခြားစစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
Total serum protein test ကိုမလုပ်ခင် ဘာတွေ သိထားသင့်သလဲ။
သွေးတွင်းပရိုတင်းကို လျှပ်စစ်လှိုင်းဖြတ်စီိးစေပြီး စစ်ဆေးခြင်းနည်း Serum protein electrophoresis test ဟာ သွေးအတွင်းက ပရိုတင်းတွေရဲ့ တိကျတဲ့အုပ်စုကို စစ်ဆေးဖို့ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစ်ဆေးမှုကို သင့်မှာ globulin ပမာဏ ပုံမှန်မဟုတ်ရင် ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
ပျက်စီးနေတဲ့အသည်းဟာ ပရိုတင်းတွေကို မထုတ်လုပ်နိုင်ပါဘူး။ အရင်ကျန်ခဲ့တဲ့ပရိုတင်းတွေက သွေးအတွင်းမှာ ၁၂ ရက်ကနေ ၁၈ ရက်အထိ ကျန်နေနိုင်တာကြောင့် သွေးအတွင်းကျဆင်းခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေကို နှစ်ပတ်လောက်နေမှ ပြတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသည်းရဲ့ ပရိုတင်းပြုလုပ်နိုင်စွမ်းကနေတစ်ဆင့် အခြားရောဂါတွေရဲ့ အခြေအနေကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေနဲ့ အဆီတွေကို ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းမှာ သိမ်းထားနိုင်ပေမယ့် ပရိုတင်းကိုတော့ မသိမ်းထားနိုင်ပါဘူး။ ပရိုတင်းတွေဟာ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေအဖြစ် တောက်လျှောက်ပြိုကွဲနေတာဖြစ်လို့ ပရိုတင်း၊ ဟော်မုန်း၊ အင်ဇိုင်းအသစ်တွေနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာက လိုအပ်တဲ့ အခြားအရာဝတ္ထုတွေကို ဆက်တိုက် ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိုတင်းတွေကို ဆီးအတွင်းမှာလည်း တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
Total serum protein test တွေကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်သင့်သလဲ။
ဒီစစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်မီ သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ သောက်နေတဲ့ဆေးတွေ၊ ရှောင်သင့်တဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကောင်းဆုံးရလဒ်ရစေဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် စံစစ်ဆေးမှု တစ်ခုကို ပြုလုပ်ဖို့ အထူးတလည် ပြင်ဆင်ဖို့ မလိုပါဘူး။
စစ်ဆေးမှု အဖြေတွေကို သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ ဆေးတွေကတော့
Total serum protein test နဲ့ စစ်ဆေးနေချိန်မှာ ဘယ်လို ဖြစ်မှာလဲ။
သင့်ဆရာဝန်ဟာ လက်မောင်း (သို့) တံတောင်ဆစ်နားက နေရာကို ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ သန့်စင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့အခြေအနေတွေမှာ လက်မောင်းအပေါ်မှာ သားရေကြိုးကိုချည်နှောင်ပြီး သွေးပြန်ကြောကိုဖောင်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ သွေးပြန်ကြောတွေကနေ သွေးယူဖို့ လွယ်ကူစေပါတယ်။
သင့်လက်မောင်းကို အပ်နဲ့ဖေါက်ပြီး သွေးပြန်ကြောထဲကို အပ်ထည့်လိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးယူမယ့် ဖန်ချောင်းကိုတော့ အပ်ရဲ့ အခြားထိပ်တစ်ခုမှာ ဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Total serum protein test လုပ်ပြီးသွားချိန် ဘာဖြစ်မှာလဲ။
သားရေကြိုးကို လက်မောင်းမှာပတ်ထားတာမို့ တင်းကျပ်မှုကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အပ်ထိုးထားတဲ့နေရာက ဘာမှ မခံစားရခြင်း (သို့) အနည်းငယ်စူးရှနာကျင်ခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်ထက်များနေတဲ့အဖြေတွေဟာ အောက်ပါရောဂါတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကြာရှည်စွာ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း (HIV ၊အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ပိုး၊ စီပိုး)
သွေးကင်ဆာ (multiple myeloma)
ပြန်ရည်ကျိတ်ကင်ဆာတစ်မျိုး (Waldenstrom disease)
ပုံမှန်ထက်နည်းတဲ့ အဖြေတွေကတော့ အောက်ပါရောဂါတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
gamma globulin မရှိသောရောဂါ
ကျောက်ကပ်ရောဂါ (Nephrotic syndrome)
ဓါတ်ခွဲခန်းနဲ့ ဆေးရုံတွေပေါ်မူတည်ပြီး သွေးတွင်း ပရိုတင်းအားလုံးစစ်ဆေးခြင်းအဖြေတွေဟာ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုသိလိုတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒီစစ်ဆေးနည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုရင် ညွှန်ကြားချက်တွေကို ပိုမိုနားလည်စေဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Total Serum Protein. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/total-serum-protein?print=true. Accessed June 20, 2016.
Total Protein Test. http://www.healthline.com/health/total-protein. Accessed June 20, 2016.
Total protein. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003483.htm. Accessed June 20, 2016.